Semalt Explication Ce Qui Provoque La Désinformation Na SEO
Ọtụtụ ndị ahịa na ndị ọkachamara nchọgharị na-eche na ị nwere ike ịdebanye aha na Google site na ị tinye ọtụtụ okwu n'ime ọdịnaya nke gị n'ụlọ obibi. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị na-eche na akụkụ nke ọdịnaya nwere ike ịbanye na search engines ma ọ bụrụ na ha na-shared ọtụtụ ugboro. Ndị a bụ eziokwu ụgha. Nkọwa okwu na-enweghị ike ịkpali Google ka ị debe aha. Ọ bụ ezie na enwere njikọta na ọ bụrụ na ozi ndị e nwekọrịtara ugboro ugboro na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ọtụtụ ndị na-abanye na ntanetị, Google na-enwetakarị na ndị na-ekere òkè dị iche iche na-ekere òkè na ọkwa nke potentialiel. N'ihi nke a, ọ bụrụ na akụkụ nke ọzọ na-ebute site na nsụgharị na elu bụ nanị otu eziokwu na-emeghị ihe ọ bụla.
Jack Miller, onye nchịkwa nke ahịa ahịa nke Ọkachamara , kọwaa ihe mere ịchọrọ ịchọta ihe dị iche iche bụ nke kachasị mma n'ime oge anyị a na ihe ị ga - egbochi gị.
Ọ na-agbakwunyere na ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ihe ọ bụla. Echiche ndị a na-emekarị na ndị mmadụ na-emekarị ka ndị na-abụghị ndị ọrụ ha. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ SEO jupụtara n'ime ụgbọ ala nke eziokwu na ọtụtụ ihe, ha anaghị eme ihe ziri ezi. Nke a bụ na ndị algorithms nke niile search engines, gụnyere Google, bụ ndị kasị mma nzuzo, nke a pụtara na ha nwere ike ọ bụghị gosipụta na ha na-ele anya n'oge nke classement nke nsonaazụ, ma ha nwere ike inye naanị indices. N'otu aka ahụ, a na-anabata otu echiche ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ ga-emetụta ya..Dịka ọmụmaatụ, ọdịnaya dị iche iche na-enwe mmekọrịta dị iche iche nke ndị mmadụ na-enwe nnukwu ohere ịnweta ọnụọgụ ndị ọbịa, mana nke a bụ ike na ọ bụ pasita nke mgbasa ozi na-arụ ọrụ. N'ihi nke a, n'elu ala nke ihe ọmụma kwesịrị ekwesị na anyị na ndị sociales, ọ bụ otu ihe dị mfe nghọta.
Ụdị ihe nkiri
Ngwa ngwa ngwa nke SEO na-eme ka ndị mmadụ nweta ihe ọmụma. Ọ bụ ezie na Google kwadoro na mgbasa ozi kalenda na-agba ọsọ na n'ihu, ike ọgwụgwụ, na-enye ọhụrụ teknụzụ na ụdị nke nnyocha na-esiri ike ịchọta search optimizations. Nke a nwere mmetụta dị iche iche na mgbasa ozi nke disinformation, ụgbọ ala a ozi n'oge ochie nwere ike dị mfe ịchọta ihe, na ndị mmadụ na-enye ọtụtụ mgbe inadéquates ozi na-eme ka a na-achọ ịchọta ihe ọhụrụ ma ọ bụ ọhụrụ update. Ịghọta ihe ọmụma dị na ya dị mkpa, ma otu ngwa ngwa nwere ike ime ka ị ghọta ihe na-eme n'eziokwu. N'ikpeazụ, na ngwa ngwa ọsọ ọsọ, ozi ọjọọ nwere ike ịbawanye na mbara igwe ma ọ nwere ike ịbụ oke oge iji nyegharịa ya otu oge site na obodo.
Kpachapụ anya ịchọta disinformation
Références croisé. Na-atụle ihe ọmụma dị iche iche site n'aka di iche iche. Chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta data nke na - egosi na ị nwere ike ịchọta ozi dị na isi iyi.
Chọọnụ ihe na-egosi na ọ dị mma. Ọ bụrụ na ịnye akụkọ na-enye ozi n'ozuzu, dịka ọmụmaatụ, chọọ data ọnụ ọgụgụ, ihe ziri ezi na ọnụ ọgụgụ ndị nwere ike ịchọta n'ime ndị ọzọ.
Chọpụta ndị isi gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ n'akụkọ ifo na-enye ozi banyere ndị tactics de référencement, ọ ga-adịkwu mkpa ma ọ bụrụ na ị na-achọ otu onye nke a larịị na ntọala.
Mee ka ị ghara ịtụ anya. Gbalịa ịchọta ụfọdụ nke gị croyances ka ị bịarute nke kachasị eziokwu.